HilliDava-YogaFarm - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguOxana&Danil
Yahlula indlu yeadobe yesiNtu yaseMoldavian enegadi ezinkulu, imithi yeziqhamo kunye nomdiliya. Apha unokwenza uhambo olujikeleza ilali, okanye ube nohambo oluya kwilali ukuya kwii-househlods zasekhaya. Apha unethuba lokuzama izitya zokwenyani ze-autenthic moldavian kwiimveliso ezitsha, ezithengwe kwiifama ezijikelezileyo.
Ke unokuchitha ixesha nendalo, ube nosapho lwakho, utye ukutya okunempilo, ukudibanisa ukukhwela intaba, uziqhelanise neyoga kunye nokucamngca, uhambo, igadi yendalo kunye nepermaculture kwaye Yonwabe!
Indlu yethu yeendwendwe ibekwe kude neendawo zemizi-mveliso, ukwenza i-cighways, ungcoliseko lwegesi yesixeko, ingxolo kwindawo yokuhlala yamandulo yabantu abasemantla ikwilali yaseHiliutsi.e kwilali yaseHiliuti, kwisithili saseRascani.
Umgama omalunga neekhilomitha ezingama-50 ungenza uhambo lokuhamba intaba kwiindawo ezintle zendalo ezinje ngehlathi laseRoyal, i-hunfred Hills enye, umlambo iPrut. Kwakhona apha unokwenza uhambo olujikeleza ilali, okanye ube nohambo oluya kwilali ukuya kwii-househlods zasekhaya. Apha unethuba lokuzama izitya zokwenyani ze-autenthic moldavian kwiimveliso ezitsha, ezithengwe kwiifama ezijikelezileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Oxana&Danil
Siyathanda ukunxibelelana neendwendwe, kwakhona siziva xa kufuneka ukuba yedwa kwaye baphumle. Iindwendwe zinokuqhagamshelana nathi ngefowuni, i-SMS okanye i-imeyile.